समाचार Archives - Page2of4- Valley Khabar
नुवाकोटकी शान्ति र अर्जुन (नाम परिवर्तन) पाँच वर्षसम्म लिभिङ टुगेदरमा बसे। मजदुरी गर्दै हिँडेका उनीहरू कालिमाटीमा भेट भएपछि सँगै जीउने सँगै मर्ने वाचा कसम खाए । आर्थिक रूपमा अलि सम्पन्न भएपछि विवाह गर्ने भन्दै अर्जुनले […]
August 8, 2019 dhan kush
कहिलेकाँकी गल्तीले हातमा रातो खुर्सानीको धुलो लाग्यो भने जलन सहन गाह्रो पर्छ । यस्तोमा तपाइँमा सोच्नुस् त कसैले महिलाको योनीमा रातो खुर्सानीको धुलो हाल्दियो भने कस्तो हुन्छ होला ? यस्तै घटना यतिबेला चर्चामा छ। जहाँ […]
August 5, 2019 dhan kush
OMG-सर्पले डसेको झोकमा सर्पलाई दाँतले चपाएपछि
August 4, 2019 dhan kush
विश्वमा मान्छे नै हो जो अनेक थरी कुराहरु गर्न मन पराउँछ । यस्तै आफुलाई सर्पले डसेको झोकमा एक व्यक्तिले उल्टै सर्पलाई टोकेका छन् । यो घटना छिमेकी मुलुक भारतको गुजरातस्थित महिसागर जिल्लामा भएको हो । […]
August 3, 2019 dhan kush
एजेन्सी : भारतको हैदरावादमा एक सफ्टवेयर इन्जिनियर आफ्नो श्रीमतीका साथ बिताएको अन्तरंग पललाई पोर्न साइटमा अपलोड गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । भारतीय साइबर अपराध शाखाले लामो अनुसन्धनपछि ती सफ्टवेयर इन्जिनियरलाई पक्राउ गरेको हो । […]
August 2, 2019 dhan kush
एजेन्सी । नक्कली दुध बनाउन प्रयोग गरिने केमिकल तथा अन्य खतरानाक रसायनका कारण क्यान्सर तथा ट्यूमर जस्ता खतरानाक बिरामीको संख्या बढिरहेको छ मिलावट गरिएको दुधको सेवनले क्यान्सर र ट्यूमरको खतरा बढ्दै गएको क्यान्सर रोग विशेषज्ञ […]
अनिशा सापकोटा बहिनीलाई आफु सक्दो सहयोग गरौ ! धनले न सके पनि मनले सक्दो शेयर गरौ
मेरो प्यारो साथी अनिशा सापकोटा लाइ Meningo Encephalitis र Brain TB जस्तो घातक रोग देखिएको र बिगत १९ दिन देखि पाटन हस्पिटलमा उपचारचलिरहे पनि अझै कम्तिमा १ महिना सम्म उसको उपचार यहि गतिले गर्नुपर्ने र […]
July 27, 2019 dhan kush